Sheekh Shariif oo taageero u muujiyay tallaabadii ay qaadeen Ciidamada Badbaado Qaran - Awdinle Online
Sheekh Shariif oo taageero u muujiyay tallaabadii ay qaadeen Ciidamada Badbaado Qaran
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa soo dhaweeyay heshiiskii doorashada ee dhawaan lagu gaaray Magaalada Muqdisho si dalka uu u aado doorasho loo dhan yahay.
Sheekh Shariif oo hadal ka jeediyay Munaasabad lagu sagootinayay Madaxda dowlad goboleedyada ayuu uga mahad celiyay doorkii ay ka qaateen in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in dadka Soomaaliyeed ay muujiyeen inay yihiin kuwo u bisil dowladnimada una diyaarsan doorasho loo dhan yahay oo ka dhacda dalka oo dhan.
Hadalka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa xilli dhawaan Madaxda Madasha wadatashiga Qaran ay heshiis ka gaareen arrimaha doorashooyinka, isla markaana dhawaan la filayo inay bilaawdaan.
Next articleRW oo guddi u magacaabay soo xaqiijinta cabashada guddiyadda doorashada